Wararkii ugu dambeeyay xaaladda magaalada Cadaado oo saakay dagaal ka dhacay – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Wararkii ugu dambeeyay xaaladda magaalada Cadaado oo saakay dagaal ka dhacay
Wararka naga soo gaaraya magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in xaaladda magaaladaasi ay haatan tahay mid degan, kadib markii saakay aroortii uu halkaasi dagaal dhex maray ciidamo ka kala tirsan booliska iyo nabad-sugidda ee NISA ee maamulka Galmudug.
Dagaalkaasi ayaa la sheegayaa inuu ku bilawday kadib markii ciidamo ka tirsan kuwa NISA ay saakay tageen xarun ay ku shiraan xildhibaanada xilka ka qaaday madaxweynaha Galmudug C/kariin Xuseen Guuleed, halkaas oo ay ilaaliyaan ciidamada booliska iyagoo ku amray inay isaga baxaan xaruntaasi.
Ciidanka booliska oo amarkaasi muran ka keenay ayaa dhalisay in labada ciidan ay rasaas is-weydaarsadaan, ka dibna uu dagaal kale ka dhaco goobtaasi, waxaana rasaastaasi ka dhashay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Inta la xaqiijiyay waxaa is-rasaaseyntaasi ku geeriyootay 2 askari oo ka tirsan ciidanka halkaasi isku fara-saaray, waxaana ku dhaawacantay tiro intaasi ka badan.
Is-rasaaseynta ayaa la sheegayaa inay socotay muddo saacado ah, waxaana markii dambe xaaladda magaalada Cadaado ay noqotay mid caadi ah kadib markii ay soo dhex galeen waxgarad iyo saraakiil ay ka mid yihiin kuwa AMISOM.
Ciidamada nabad-sugiida ee NISA ayaa la sheegayaa in gebi ahaan laga saaray xarunta ay saakay tageen, waxaana dib loogu celiyay fariisimahoodii ay ku leeyihiin magaalada Cadaado.
Dhinaca kale, taliyaha AMISOM Cismaan Nuur Subagle oo maalintii shalay gaaray magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud ayaa sheegay in ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliya aysan wax lug ah ku yeelan xiisada siyaasadeed ee ka taagan maamulka Galmudug.